कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्षमा पुनः गुप्त
कपिलवस्तु, २२ मंसिर । जिल्लाको जेठो सामुदायिक क्याम्पस कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसको ९औं साधारण सभा तथा द्रोस्रो अधिवेशनवाट पुन अध्यक्षमा रामदास गुप्त अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
बुद्ध परिपथको निर्माण गर्नु आवश्यक : राष्ट्रपति भन्डारी
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, २२ मंसिर । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनीमा विश्व बिद्यालयका नवनिर्मित ५० करोड भन्दा बढी लागतमा निमार्णधिन ७ वटा भवनको उदघाटन गरेकी छन् ।
साहको संयोजकत्वमा ‘मधेश विकास मञ्च’ गठन
काठमाडौं, २२ मंसिर । तराई मधेशको विकास निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती एवं अनियमितताका विरुद्धमा आवाज उठाउने उद्देश्यले युवाहरु संगठित भएका छन् ।
देश निर्माणका लागि इन्जिनियरको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रम ओली
काठमाडौं, २२ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निर्माणका लागि इन्जिनियरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
अयोध्याबाट आउने जन्तीलाई स्वागत गर्न कांग्रेस उपसभापति निधिले दिए निर्देशन
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अयोध्याबाट आउने साधुसन्त तथा जन्तीलाई स्वागत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
नेपालमा न्याय मर्यो, अपराधीहरु सिंहदरबारको सुरक्षाभित्रै छन् : डा. संग्रौला
रुपन्देही, २१ मंसिर । निर्मलाको न्यायका निम्ति अभियान चलाइरहेकी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा.डिला संग्रौलाले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दोषी भएको बताएकी छन् ।
विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक : मुख्यमन्त्री
जनकपुरधाम, २१ मंसिर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले विकास र समृद्धिका मुद्दामा स्थानीय तहलाई हातेमालो गरेर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।
सरकारको विरुद्धमा गलत प्रचार भयो : प्रचण्ड
चन्द्रकान्त खनाल, रूपन्देही २० मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारविरूद्ध पूर्वाग्रही र नकारात्मक ढंगले प्रचार भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं, २० मंसिर । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पोल्याण्डको पाँच दिने औंपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएकी छिन् ।
पुर्पक्षका लागि डा.सीके राउत कारागार चलान
रौतहट, २० मंसिर । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सी के राउतलाई रौतहट जिल्ला अदालत गौरले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्ने आदेश दिएको छ ।
फोरमको महाधिवेशन बैशाख अन्तिम साता हुने
काठमाडौं, २० मंसिर । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्नो महाधिवेशन बैशाखको अन्तिम साता गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीको नयाँ रणनीतिका साथ सरकार समृद्धिको दिशामा : प्रचण्ड
कपिलवस्तु, १९ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले नेपालमा आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको परिणाम सजिलै देख्न सकिने बताएका छन् ।
हामी मधेशी आफैँ फरकफरक पार्टीमा रहेर हकअधिकारबाट बञ्चित भएका छौँ : मुख्यमन्त्री राउत
कपिलवस्तु, १९ मंसिर । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले सबै मधेशी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख झाद्वारा बैठक आह्वान
रुपन्देही, १८ मंसिर । प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले आगामी मङ्सिर २६ गतेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं, १८ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउत विखण्डनकारी नभई एउटा जिनियस तथा विद्वान व्यक्ति रहेको बताएका छन् ।
कानूनलाई बाधक नभई विकासको साधक बनाउनुपर्दछ : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुरधाम, १७ मंसिर । मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले विकास निर्माणको क्रममा कानूनलाई बाधक नभई साधक बन्नु पर्ने बताएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर : प्रम ओली
काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन् ।
डा.सीके राउतको रिट खारेज
काठमाडौं, १७ मंसिर । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतविरुद्धको राज्य विप्लवको मुद्दामा छ/छ पटकसम्म तारिख दिएको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट नै खारेज गरेको छ ।
डा.सीके राउतलाई आज पनि हेर्दाहेर्दामै
काठमाडौं, १६ मंसिर । मुलुक विखण्डनको अभियोगमा राज्य विप्लवको मुद्दा खेपिरहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतको मुद्दामा आज पनि हेर्दाहेर्दामै समय सकिएको छ ।
जुन दिन मधेशका पिछडावर्ग जागरुक हुन्छन्, त्यो दिन मात्रै मधेशको मुक्ति सम्भव हुन्छ : राजपा नेता यादव
काठमाडौं, १६ मंसिर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेता महेन्द्र यादवले मधेशका पिछडावर्गहरु जागरुक नभएसम्म मधेशको मुक्ति सम्भव नरहेको दाबी गरेका छन् ।
महन्थ ठाकुर दिल्ली प्रस्थान
काठमाडौं, १६ मंसिर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुर भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
समृद्धिको आधार कृषि : मन्त्री पौडेल
नेपालगन्ज, १६ मंसिर । प्रदेश नं ५ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी समृद्ध प्रदेश बनाइने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री देवेगौडाबीच भेटवार्ता
काठमाडौं, १६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
नेपाललाई आर्जेको मुलुक भन्नु आन्तरिक औपनिवेशीकरणको प्रमाण हो : श्रेष्ठ
काठमाडौं, १६ मंसिर । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेवाः ताम्सालिङ समन्वय समितिको आयोजनामा नेपाल संवत ११३९ को उपलक्ष्यमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्तिका लागि संयुक्त आन्दोलन आवश्यक भएको बताए ।